Faa'iidooyinka iyo faa'iido darrooyinka soo saarayaasha astaamaha cusub | Abuurista khadka tooska ah
Melisa Perrotta | | Design Graphic, logos
Naqshadeeyayaasha maanta waxaa soo foodsaaray muuqaal ah isbeddel degdeg ah iyo firfircoonaan. Si aan ugu horumarino shaqadeena habka ugu tartanka badan ee suurtogalka ah waxaa lagama maarmaan ah in laga feejignaado isbeddellada tikniyoolajiyadda. Sidaas darteed, qalab cusub sida matoorrada astaanta.
Dareenkan, labadii sano ee la soo dhaafay waxaan aragnay codsiyo iyo bogag internet oo loogu talagalay abuurista astaamo murugsan oo hooseeya oo bilaabaya inay suuq ka helaan. Goobaha noocan ahi waxay u oggolaadaan khabiiro aan qaabeyn inay ka soo iibsadaan astaamo si aan kala sooc lahayn loo sameeyay iyada oo loo marayo nidaamyada kombiyuutarka. Kuwani mararka qaarkood waxaa laga heli karaa mar dambe noocyada SVG iyo TIFF iyadoon wax lacag ah la bixin. Qaar eTusaalooyinka agabkan waa: LogoJoy, MarkMaker, Noocyada Dawaarka, Canva y BrandMark.
1 Sidee matoorrada calaamadaha u shaqeeyaan
2 Faa'iido darrooyinka loogu talagalay naqshadeeyayaasha:
3 Faa'iidooyinka naqshadayaasha:
Sidee matoorrada calaamadaha u shaqeeyaan
Goobaha waxay ku saleysan yihiin isticmaalka algorithms kaas oo isku dhafan hababka naqshadeynta astaanta dhaqanka, halkaas oo iconography iyo typography ay caadi ahaan isku dhafan yihiin.
Waxay kuxirantahay bogga la isticmaalay, howshu way ku kala duwanaan kartaa heerarka soo socda:
Marka hore isticmaaluhu wuxuu galayaa magaca shirkadooda, ururkooda ama shirkadooda. Kadib qeex qeybta ay tahay ganacsigaaga iyo halheyskaaga.
Kadib dooro midabada iyo farta ku habboon qaabka aad raadineyso. Kadib xulo astaamaha aad u maleyneyso inay aqoonsan doonaan astaanta. Goor dambe barnaamijku wuxuu isku daraa xogta la soo saaray oo dhaliya fursado badan noocyada la xiriira qaababka la xushay.
Ugu dambeyntiina, macmiilku wuxuu ku siin karaa "sida" xulashooyinka uu isagu jecel yahay si barnaamijku u sii wado soo saarista ikhtiyaarro cusub oo aan dhammaad lahayn illaa uu ka helayo mid ku habboon.
Noocyada astaanta u ah xulashada
Astaamo ayaa la soo saaray
Faa'iido darrooyinka loogu talagalay naqshadeeyayaasha:
Shaki la'aan, waa wax laga naxo naqshadeeyaha inuu dareemo in warshad hal abuur leh, sida naqshadeynta garaafka, lagu weerari karo tikniyoolajiyad cusub oo ku saleysan sirdoonka farsamada. Dhibaatada qalabkan cusub ayaa ku jirta iyaga helitaan fudud iyo adeegsi. Sidan oo kale, waxay ka dhigeysaa iyaga kuwo ku habboon macaamiisha suurtagalka ah ee naqshadeeyayaasha dhabta ah, taas oo horseedaysa dhibaato xitaa ka weyn. Sidaa darteed, kaliya ma luminayno fursadaha shaqo, laakiin qiimaha suuqa naqshadaha calaamadaha ayaa hoos u dhacaya sababo la xiriira sharciyada bixinta iyo baahida.
Faa'iidooyinka loogu talagalay naqshadeeyayaasha:
Waxaan isku dayi karnaa inaan aragno fursadaha uu qalabkani na siinayo, annagoo ku eegayna xaaladda hal-abuur yar iyo xadgudub.
Su'aal la'aan matoorrada calaamadaha waa kuwo aad waxtar u leh inay soo saaraan dhowr soo jeedin soon. Waxay noo oggolaadaan inaan ku helno xulashooyin midabyo kala duwan leh, oo leh mowqifyo kala duwan oo walxo iyo noocyo leh hal guji oo keliya. Si kastaba ha noqotee, fikradaha fikradda iyo tayada macne ee astaamaha la soo saaray waa wax aan waxba ka jirin. Sidan oo kale dhibaatada waxaa uga faa'iideysan kara naqshadeeyayaasha. Tusaale ahaan, marka laga hadlayo waxay ubaahantahay inaad soo gudbiso sawirro badan soomo oo cadee waxa macmiilku rabo. Ama sidoo kale si fudud sida qaab waxyoon ama aragtida degdegga ah ee naqshadda maskaxda ku haysa. Mar dambe waa inaad dhammaystirtaa oo aad qaabeeysaa hal naqshad oo kama dambaysta ah, adigoo sidan ugu shaqeynaya si wax ku ool ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » Soosaarayaasha astaanta cusub: faa'iidooyinka iyo khasaaraha
Matoorradan waxay dhaliyaan astaamo wax laga yaqyaqsoodo ah, macnahoodu maahan inay ku siinayaan astaan ​​ama qaab aan shaqo ku lahayn shirkaddaada, laakiin in astaamaha badankood ay yihiin kuwo fool xun illaa heer ilmo laga gaadho.
Salaan! Aad baad ugu mahadsantahay faalladaada. Dhab ahaan waxa maqaalku kor uqaadayo waa waxaad sheegatay. Matoorradan waxay soosaaraan astaamo heerkoodu hooseeyo qeybta uguxunna waxay tahay in dadka isticmaala ay dhab ahaan u isticmaalaan inay yihiin sheyga ugu dambeeya. Sababtaas awgeed, waxaa loo soo jeediyay inay suurtagal tahay, iyadoo aan loo eegin tayada, in looga faa'iideysto faa'iido darrooyinkaan anaga noo daneynaya.
Anigu waxaan ahay naqshadeeye sidoo kale waxaan xiriir la leeyahay dunida geek iyo teknolojiyadaha cusub: sirdoonka farsamada, barashada mashiinka, iwm.
Sida iska cad kuwani waxay bixiyaan astaamo heerkoodu aad u hooseeyo, laakiin waa inaan maskaxda ku haynaa in tikniyoolajiyaddu ay ku korayso boodbood iyo soohdin, abuureyaasha tan uma maleynayaan inay ku jiraan gacmo is dhaafsi ah haddii aysan arkin sida adeegyadan loo horumarin karo.
Marka xirfadda loogu talagalay naqshadeeye astaan ​​yar ayaa si weyn u saameyn kara, illaa aad maareeyso inaad ka shaqeyso jidkaaga illaa heer aad noqoto naqshadeeye la aqoonsan yahay.
Kama soo horjeedo tikniyoolajiyada cusub iyo waxa mid naqshadeeye u ah inaan arko qaabka aan u adeegsan karno ama aan u aragno habka aan ugu furi karno tikniyoolajiyadan.
Kuwani waa kuwa ugu hal abuurka badan tufaaxyada aad waligaa arki karto